Top 10 sản phẩm sữa tăng cơ cho người tập gym tốt nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Top 10 sản phẩm sữa tăng cơ cho người tập gym tốt nhất hiện nay | Muasalebang
Đang Đọc: Top 10 sản phẩm sữa tăng cơ cho người tập gym tốt nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Kunezinhlobo eziningi emakethe namuhla ubisi lwemisipha Ukusekela ukuzivocavoca futhi uthuthukise umzimba wakho. Kodwa-ke, umbuzo uthi ngabe lolu bisi luhle? Ingabe kufanele ngiyisebenzise ngesikhathi sokuzivocavoca?
Uma uzibuza ngalolu daba, funda isihloko sami manje! Ngiqinisekile nawe uzoba neyakho impendulo.
A. Ingabe kufanele ngisebenzise ubisi lwemisipha lapho ngizivocavoca?
1. Kuyini Ubisi Lwemisipha? Ingabe kuthinta impilo?
Lesi isithasiselo sokudla esiyimpuphu, esiqukethe inhlanganisela elinganiselayo ye-Whey Protein, amavithamini amaningi nezinye izinto ezifana ne-BCAAs nama-amino acid, i-glutamine ukusekela ukululama nokukhula kwemisipha ephezulu. Ngaphezu kwalokho, ubisi olusekela ukuzuza kwemisipha lusiza ukuthuthukisa ukugayeka kokudla, ukumuncwa kangcono kwezakhamzimba, futhi lunikeze amaprotheni afanele emzimbeni.
Ingxenye eyinhloko yobisi iphrotheni ekhishwe obisini olusha futhi ayisetshenziselwa ukufaka esikhundleni sokudla kwansuku zonke. Lolu hlobo lobisi alunayo imiphumela emibi kanye nemiphumela eyingozi empilweni. Ngokuphambene nalokho, uma kusetshenziswe ngendlela efanele, ngesilinganiso esifanele, kuhlanganiswe nokuzivocavoca okufanele, nakho kunenzuzo kakhulu kubasebenzisi, kukusiza ukuba ube nomzimba othonisiwe futhi onempilo.
– Ubisi lwezicubu lusiza ukwengezela izinto eziningi ezibalulekile kubantu abaya ejimini njengamaprotheni (Whey Protein Isolate, Whey Protein Concentrate and Whey Peptides,…), amino acids, glutamine…
Ukululama nokukhula kwemisipha ngemva kokuzivocavoca
Shisa amafutha amaningi
Isekela imisebenzi yokugaya ukudla
Thuthukisa amasosha omzimba
Nokho, ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu, udinga ukuyisebenzisa njalo nangesilinganiso esifanele. Hhayi ngoba ufuna ukusheshisa inqubo yokuthola imisipha, kodwa ukuhlukunyezwa nokuphuza ngokweqile ngesikhathi esifushane. Lokhu akusebenzi nje kuphela, kodwa futhi kuyaphikisana. Ngaphezu kwalokho, kubantu abane-gout, isifo sesibindi noma ukungezwani ne-lactose akufanele kusetshenziswe.
2. Kungani kufanele usebenzise ubisi lwemisipha?
Ukuze uthole imisipha, udinga ukunikeza umzimba wakho amaprotheni anele usuku ngalunye. Uma ungaqiniseka ukuthi uthola amaprotheni anele usuku ngalunye ekudleni okunamaprotheni amaningi njengenyama, inhlanzi, amaqanda, ubisi, njll., ungase ungadingi ukuwasebenzisa.
Nokho, ngokuphithizela kwempilo yesimanje, bambalwa kakhulu abantu abanesikhathi esanele sokulungiselela ukudla okujwayelekile. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kobisi lwemisipha kuyindlela ehlukile futhi ikhethwa abantu abaningi. Ngokuqondile:
Yonga isikhathi sokulungiselela ukudla
Ama-flavour amaningi amnandi
Engeza inani elikhulu lamaprotheni ukuze ukhulise ngempumelelo imisipha
Thuthukisa ukululama nokuzuza kwemisipha ngemva kokuzivocavoca
Gcwalisa amandla emisipha ngesikhathi sokuzivocavoca
Yengeza amavithamini kanye nama-micronutrients adingwa umzimba
4. Ukuhlukaniswa kobisi lwemisipha:
Ubisi lokuzuza kwemisipha ngokuyisisekelo kuyi-hormone yokuzuza isisindo. Bahlukaniswe ngamaqembu amaningana:
Iqembu 1: I-Anabolic steroids
Inzuzo: Ukusebenzisa lolu hlobo lobisi kuzosiza ukwandisa inani lamaprotheni e-intracellular, kukhuthaze ukukhula kwamathambo kanye nomsebenzi wamathambo ukuze kwandiswe inani le-phagocytosis egazini. Ngenxa yalokho, umzimba uqinile futhi ubudoda buvezwa ngokucacile.
Isici: ziyiqembu lezinhlanganisela ezingadala umdlavuza, zandise ukukhula komdlavuza wamasende kanye nomdlavuza wendlala yesinye. Ukusetshenziswa isikhathi eside kuzodala imiphumela emibi emzimbeni njengokuthi: ukulimala kwesibindi, i-arrhythmia, umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, ukufa okungazelelwe.
Iqembu lesi-2: Iqembu lama-hormone okukhula
Inzuzo: Iqembu lama-hormone okukhula likhulisa i-anabolism, livuselela ukukhiqizwa kwamangqamuzana, likhulise imisipha, likhulise ukwakheka kwamaprotheni.
Isici: Uma usebenzisa leli qembu lobisi hhayi njengoba uyalelwe udokotela wakho, kuzoholela engcupheni yesifo sikashukela, eminye imidlavuza kanye neHodgkin lymphoma.
Iqembu 3: I-Beta agonist
Inzuzo: Ilawula ukukhula kwemisipha nokuwohloka kwamafutha, isiza ukwandisa imisipha futhi inciphise amafutha, idale imisipha emihle.
Isici: Ukusetshenziswa okungalungile noma ukweqisa izidakamizwa kuzodala i-hypoglycemia, isiyezi, ukuthuthumela, ikhanda elibuhlungu, ukushaya kwenhliziyo okukhuphukayo, ukucasuka kwesisu, ukukhuphuka komfutho wegazi, i-myocardial infarction.
Kuyabonakala ukuthi izithasiselo zokuzuza imisipha azikho lokhu esikucabangayo, uma zingasetshenziswa kahle kuzoba nemiphumela engalindelekile, ikakhulukazi kwabesifazane.
5. Sebenzisa ubisi lwemisipha ngendlela efanele
Thatha inani lobisi eli-1 ngokwesilinganiso esinqunyiwe bese uxuba namanzi
Bese unyakazisa ngamandla imizuzu engaba ngu-30 ukuncibilikisa ubisi. Akufanele usebenzise ukhukhamba! Ngenxa yokuthi uyalicosha, ngeke lincibilike ngokulinganayo njengokunyakazisa futhi ukuphuza kuzodala udoti okunzima ukuwuphuza.
Qaphela: Ukuze uthole shaking esheshayo futhi ephumelela kakhulu, kufanele uthenge ngokushesha i-shaker nge-spring. Ungabhekisa ku-Ifitness Pro Shaker 4-in-1 shaker! Leli bhodlela likhethwe abantu abaningi futhi laziswa kakhulu! ODA LAPHA!
Ngoba uphuza nsuku zonke, ukuze unciphise isithukuthezi, ungakwazi ukwengeza ubisi olusha olu-1 + 1 sitrobheli noma yisiphi isithelo (esihlanzekile) esihlanganiswe ubisi lwemisipha Ngiyacela! Ukunambitheka kuzohluka!
Isikhathi sokuphuza ubisi:
Ukuze uthole imisipha, umzimba wakho udinga amaprotheni amaningi kunokuvamile. Nokho, ubisi alusetshenziswa ngaso sonke isikhathi. Uma uyisebenzisa ngesikhathi esifanele, umphumela uzoba phezulu kakhulu. Ngokuqondile:
Ekuseni ngemva kokuvuka
Ngaphambi nangemva kwe-gym cishe imizuzu engama-30
– Inani lobisi ukwandisa ukusetshenziswa kwemisipha nsuku zonke
Njengoba ngabelane, awudingi ukusebenzisa okuningi ngendlela ofuna ngayo! Inani lamaprotheni ngaphezulu noma ngaphansi lincike ekuqineni kokuzivocavoca kwakho. Kufanele udle kuphela cishe i-1-2g yesisindo somzimba nge-kg ngosuku.
Isibonelo: Uma unobude obungu-65kg, ufuna ukuzuza imisipha ngokushesha + ukuqina kokuzivocavoca kuphezulu, wengeza amaprotheni angu-2g/kg. Ngakho-ke, kufanele udle i-130g yamaprotheni nsuku zonke. Leli inani eliphelele leprotheni losuku olungu-1. Nen udinga ukuvumelanisa kahle ngokuhambisana nokudla nokuphuza!
– Ungakhetha kanjani ubisi lwemisipha ukuze lufaneleke futhi lulondoloze
Ukuze ukhethe uhlobo olufanele lobisi, udinga ukubonisana nochwepheshe kuqala. Bese uthola amakheli ahloniphekile okusabalalisa ubisi ukuze u-ode.
Intengo ngezinye izikhathi ihlukile, kodwa akufanele ugcizelele kakhulu inkinga ngoba “kuyabiza ukusika izingcezu” ukugwema ukuthenga izimpahla zomgunyathi, ezithinta impilo ngqo.
Uma usazibuza ukuthi unga-oda kuphi, ungathembela ku-ifitness! Leli yikheli elihloniphekile eligxile ekusabalaliseni ukudla okunomsoco kanye nezinsiza zezemidlalo kwabahambela ejimini. I-Ifitness ibuye ibe nokukhushulwa okuningi okufana nezaphulelo noma izipho ezihambisana nayo, iqinisekisa izithakazelo ezingcono kakhulu zamakhasimende!
Wonke umuntu angabuyekeza i UKUKHUTHAZWA OKUSHISA KAKHULU KU-IFITNESS lapha!
B. Imikhiqizo yobisi ephezulu eyi-10 yabantu abavocavoca umzimba
1. Iqanda Elimhlophe Amaprotheni Iqanda Elimhlophe Ovovita
Umthombo wemvelo ophelele kakhulu wamaprotheni
Isebenza kakhulu kuneWhey Protein ekwakheni izicubu ezithambile
Awekho amahomoni, awekho ukushisa, awekho amaqhubu
Ukuphakelwa okungu-1 kulingana namaqanda amhlophe angu-6
23g Amaprotheni 4g BCAAS ngokuphakela ngakunye
100% izithako ezingezona ze-GMO (NON GMO)
ISIXHUMANISO SOKU-ODA IMIKHIQIZO YANGEMPELA
I-Albumin: Iphrotheni esezingeni eliphuma kwabamhlophe beqanda, imuncwa ngokushesha futhi ayinawo amafutha
Izinhlobo eziyi-17 zama-amino acid & Bcaas: zisekela ukuzuza kwemisipha futhi zengeze ama-amino acid abalulekile
I-sunflower Lecithin: I-Sunflower Emulsifier, I-Soy Free, Non-GMO
I-Stevia: Ikhishwe ku-stevia – Ayikho Ikhalori, ingasetshenziselwa abanesifo sikashukela
I-flavour yemvelo: Umsuka wezinto ezikhishwe zemvelo, ezimnandi
2. Prostar 100% Whey Protein Milk
Okuqukethwe kwamaprotheni aphezulu, okuhlanganiswe nemithombo emi-3 yamaprotheni amunca ngokushesha okuhlanganisa: I-Whey Protein Isolate, I-Whey Protein Concentrate kanye ne-Whey Peptides.
Ihlinzeka ngama-BCAA ukusiza ukuthuthukisa ukusebenza kokuzivocavoca nokunciphisa ukukhathala ngemva kokuzivocavoca
Izithako ezinamafutha aphansi, ushukela ophansi, isitashi esiphansi, ama-amino acid amaningi abalulekile
Inani: 650,000 VND / ibhokisi 454g
Intengo / umthamo (isikophu esingu-1 esilingana no-30g): 43,046 VND
Ukunambitheka: ushokoledi ne-vanilla
3. ISO Sensation 93 Muscle Milk
Izici ezibalulekile zomkhiqizo
Ihlinzeka ngephrotheni esezingeni eliphezulu futhi emsulwa emuncwa ngokushesha.
Yehlisa ubuhlungu bemisipha kanye nobuhlungu, uthuthukise amandla nokukhuthazela ngesikhathi sokuzivocavoca
Isekela ukulahlekelwa kwamafutha futhi inciphisa ingozi yesifo senhliziyo
Inikeza izithako ze-colostrum ukusiza ukuvimbela i-oxidation futhi yenze isikhumba sibe sihle
I-Lactose neGluten ayinayo
Inani: 850,000 VND / ibhokisi le-910g
Intengo / umthamo (isikophu esi-1 esilingana no-32g): 47,473 VND
Ama-flavour: i-vanilla, ushokoledi kanye ne-strawberry
4. Impact Whey Protein Milk
Nikeza ikhwalithi ephezulu ye-Whey Protein Concentrate
Ihlinzeka nge-BCAAs ne-Glutamine ukusiza ukuvikela, ukulungisa nokwakha imisipha
Kwengezwe ngokugcwele ngama-amino acid abalulekile nangabalulekile ukusekela ukwakheka kwezicubu ezithambile kanye nokuvikelwa kwezempilo okuphelele.
Imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ngamanani athengekayo
Ukunambitheka: Ubhanana, Sitrobheli, Ikhekhe, Ushokoledi kanye Vanila
Inani: 660,000 VND / ibhokisi le-1 kg
Intengo/idosi (isikophu esi-1 silingana no-25g): 17,250 VND.
5. Ubisi lwe-Whey Gold Muscle
Engeza imisoco eminingi efana nama-calories, amaprotheni, ama-carbohydrates, amafutha agcwele, … emzimbeni.
Ihlinzeka ngama-BCAA nama-EAA, ihlinzeka ngomthombo wemvelo nonempilo wama-amino acid
Kulula ukuhlanganisa futhi kulula ukugayeka, ngokunambitheka okuhlukile
Ukunambitheka: I-vanilla noshokoledi
Inani: 400,000 VND / ibhokisi le-907g
Inani / umthamo (isikophu esingu-1 esilingana no-34g): 29,239 VND.
6. I-AST VP2 Whey Protein Isolate
Nikeza I-Whey Protein Isolate
Khulisa imisipha yemisipha ngaphezu kuka-615%, ukwandisa amandla emisipha ngo-156%
Yengeza inani lama-amino acid adingekayo ukuze kuhlanganiswe amaprotheni ukuze kuthuthukiswe amaseli emisipha
I-VP2 igcina i-Nitow isezingeni eliphezulu
Inani: 950,000 VND / ibhokisi le-937g.
Inani / umthamo (isikophu esi-1 silingana no-28.2 g): 29,685 VND
7. Amaprotheni Ahlukanisa Ubisi Lwemisipha
I-Ultimate Nutrition Protein Isolate inikeza amaprotheni asekelwe esitshalweni esiza ukwakha imisipha.
Inikeza ama-amino acid abalulekile futhi angabalulekile emzimbeni
Nikeza ngo-100% ngomthombo wemvelo wama-BCAA
Akukho cholesterol, akukho ubisi noma soya
Ayinazo izithako zesilwane, ezifanele abantu abadla imifino
Isengezo se-Enzyme ukusekela impilo yokugaya
Inani: 980,000 / ibhokisi lika-908g.
Intengo / umthamo (isikophu esi-1 esilingana no-30g): 37,004 VND
8. Ubisi lwe-NitroTech Whey Gold Muscle
Ihlinzeka ngamaphrotheni ngenhlanganisela ye-Hydrolized Whey, Isolate Whey kanye ne-Concentrate.
Iqukethe ama-catalysts asekela ukukhishwa kwe-insulin ukuze amunce ngokushesha imisoco
Amazinga aphezulu e-BCAA, ikakhulukazi i-Leucine, i-Valine ne-Glutamine, asiza ngokuqeqeshwa okunamandla ngaphandle kwe-catabolism yemisipha.
Inani: 880,000 VND / ibhokisi le-1 kg.
Inani / umthamo (isikophu esingu-1 esilingana no-33g): 30,690 VND.
9. I-Carne Bolic Vanilla Muscle Ubisi
Okuqukethwe kwamaprotheni kuphakeme izikhathi ezingu-3.5 kunokudla inyama yenkomo entsha, okuthuthukisa ukusebenza kokwakhiwa kwemisipha
Ihlinzeka nge-premium Whey Protein Hydrolysates, umthombo wamaprotheni omunca ngokushesha kakhulu.
Awekho amafutha, awekho isitashi, awekho ushukela
I-Gluten ne-Lactose mahhala.
Inani: 980,000 VND / ibhokisi 810g
Inani / umthamo (isikophu esingu-1 esilingana no-28g): 33,877 VND
10. Best Tasting Whey Protein Milk
Inikeza Amaprotheni avela emithonjeni ye-4 yamaprotheni: I-Whey Protein Concentrate, I-Whey Protein Isolate, I-Milk Protein Isolate kanye ne-Hydrolyzed Whey Protein
Inikeza ama-BCAA emvelo kanye ne-L-Glutamine ukusiza ukukhulisa ukukhuthazela, ukuvikela nokulungisa imisipha ngemva kokuqeqeshwa.
Inikeza ama-amino acid abalulekile emvelaphi yemvelo.
Ukunambitheka okumnandi, kulula ukuphuza
Ama-flavour: I-vanilla, ikhekhe kanye noshokoledi
Inani: 1,700,000 VND / ibhokisi lika-2.27 kg
Inani / umthamo (1 isikophu mayelana 38g): 30,833 VND.
Ngenhla ngabazuzi bemisipha abahamba phambili abayi-10 nabasetshenziswa kakhulu namuhla. Ithemba ukukusiza ukuthi ukhethe ubisi olufanele kuwe, kuhlanganiswe nokuzivocavoca okuphumelelayo ukuze uthole ngokushesha umzimba omuhle.
Xem Thêm Son màu đỏ gạch là gì? 10 thỏi son được bạn gái yêu thích 2022 | Muasalebang
Kích thước các loại bếp điện từ âm hiện nay【Mới nhất】 | Muasalebang
[Review] Top 8 son không chì tốt được tin dùng nhất hiện nay | Muasalebang